Soomaali maxkamad lagu soo taagay Denmark - BBC News Somali
Soomaali maxkamad lagu soo taagay Denmark
19 Jannaayo 2011
Image caption Kurt Westergaard waxa uu u dhashay waddanka Denmark
Bishii Jannaayo ee sanadkii hore, ninka dacwaddan loo haysto waxaa la sheegay inuu u dhacay guriga ninka sawir gacmeedka sameeya ee la yiraa Kurt Westergaard, magaalada Aarhus, uuna ku hanjabay inuu ninkaas Faash ku dilayo.
Mr Westergaard waxaa uu sheegay inuu ku cararay musqushiisa cabsi awgeed, uuna police-ka u yeeray. Markii ay police-ku yimaaddeen waxay ugu dambaystii xireen ninkii guriga u dhacay kaddib markii ay dhib kala kulmeen ayna labo xabbadood ku dhufteen. Ninka la tuhunsan yahay, oo isagu beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay, waxaa la sheegay inuu xiriir la leeyahay kooxda islaamiga mintidka ah ee dalka Soomaaliya ee Al Shabaab.
Ninka sawir gacmeedka sameeya waxaa soo wajahay hanjabaado badan oo ah in la dilayo tan iyo markii uu sameeyay sawrirrada muranka dhaliyay oo lagu daabacay wargeys ka soo baxa dalka Denmark sanadkii 2005tii. Sawirradaas mid ka mid ah waxaa uu ahaa Nebi Muxammad NNK oo xiran tarbuush loo ekeysiiyay bomb leh meel laga qarxiyo.
Sawir gacmeedyadaasi waxay kiciyeen caro iyo muddaharaadyo ka dhacay dunida muslim-ka oo dhan sanadkii 2006dii iyo mar kale sanadkii 2008dii oo haddana lagu soo daabacay wargeysyo kale oo fara badan.